Masaf The Jebiyayaasha Karinta - Masaf Of The Day
Masaf The Jebiyayaasha Karinta
Masaf The Jebiyayaasha Karinta waa mid ka mid ah qurbaanno ugu weyn ee website-ka Clickfunnels.
... Oo jidka Russell Brunson siinayaa hordhac dunida dublad.
Buuggu wuxuu bixiyaa sharaxaad tallaabo-tallaabo si ay u dhisaan dublad dadka ma oga sida ay u shaqeeyaan. Waxa kale oo uu idin siinayo daraysid on dublad aad dhisi karaan haddii aadan haysan fikrad kasta oo waxa la sameeyo.
Buuggu wuxuu sidoo kale ka shaqeeya, isagoo ah hanuuniye amaan u tahay dhammaan qoraallada kale ee ay bixiyaan shirkadda.
Haddii aad kor u gabyi doonaa website-ka clickfunnels, tani waa hage ugu weyn ee kaa caawin doona inaad samayso sida ugu fiican ee aad soo booqato hore iyo sida ay u diyaarin goobaha aasaasiga ah ee qalliinka.
Tani waa waxa aad u baahan tahay inaad samayso XAQA NOW si aad u hesho nuqul: riix halkan
Sheegashada aad nuqul free of karinta ee, iyo thezm sheeg meesha si ay u soo diri (waxaa jira lacag maraakiibta yar, laakiin i aamini…waa buug qurux badan oo xaqiiqo ah oo qiimihiisu isagoo nuqul jirka)
Buugani waa sida 10 sano aqoonta masaf-dhisidda, oo dhan hir ururiyey galay si sahlan loo fahmi cuntada.